Soo dejisan Viber 6.1.1.2 – Windows – Vessoft
Software Signup Tani loo baahan yahay ee telefoonka gacanta
Soo dejisan Viber
Viber – software caan ah farriimaha isgaarsiinta video, qoraalka iyo codka. The qaababka ugu muhiimsan ee software ka mid ah: sarrifka file, abuurka ah ee chat koox, taageero HD video call, ugu baaqaysaa in ay telefoonada gacanta iyo kan guriga iwm Viber si toos ah synchronizes liiska xiriir ah, wac iyo taariikhda fariimaha ka user qalab mobile. Software waxay leedahay interface fudud oo si sahlan loo isticmaali.
Samee isgaarsiinta codka iyo video
Farriimaha qoraalka Exchange iyo files
.Wadashaqayntaas Dhexeeya PC iyo phone
Ku baaqay in telefoonnada gacanta iyo kan guriga telefoonada
Comments on Viber:
Viber Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... TeamTalk 5.1.7
English, Español, 中文, 日本語... ooVoo 3.6.9.10
Webcams Isgaarsiinta Voice Agabka in la sameeyo cod iyo video ku baaqay in adduunka oo dhan. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u sameeyaan wicitaanada u diro telefoonnada gacanta iyo taleefannada guryaha.
العربية, English, Français, Español... Manycam 5.4.1.1
English, Français, Español, Deutsch... KakaoTalk 2.2.4.1337
Clownfish for Skype 4.32 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... Proxifier 3.28 Standard iyo Portable
Internet Programka sirta Aalad uu siinayaa in software shabakadda awood u leh inay ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo server wakiil ah ay dhacdo in ay maqnaayeen. Sidoo kale software marayaa xadka brannmur oo awood u si ay u qariyaan IP-address.
English, Français, Español, Deutsch... Stellar Phoenix Windows Data Recovery - Home 6.0.0.1
Files Software uu ka soo kabsanayo faylasha lumay ama si qalad ah la tirtiro ee noocyada kala duwan. Sidoo kale software awood u inuu ka soo kabsado xogta ka e-mail oo la qaadi karo ee sidayaal xogta.
العربية, English, Українська, Français... FileZilla 3.21
Opera 40.0.2308.62 iyo 41.0.2349 dev
Google Chrome 53.0.2785.143, 54.0.2840.41 beta iyo 55.0.2873.0 dev